Ciise Cabdullaahi oo beeniyay in gaarigiisu qarax sido | KEYDMEDIA ONLINE
Milkiilaha gaari ay UN-ku sheegeen in uu sido qarax ayaa beeniyay arrintaas, wuxuna soo bandhigay gaariga la sheegay inuu qarxayo inta u dhaxeysa shanta ilaa sideedda bishaan Maarso.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ciise Cabdullaahi Faarax oo ah Milkiilaha Gaariga nuuciisu yahay Toyota SURF, Taargo Number-kiisuna yahay AH 2737, ayaa sheegay in markii labaad lagu been abuurtay oo isaga iyo gaarigiisa laga abuuray barabagaando aan waxba ka jirin.
Ciise, wuxuu sheegay in hadda ka hor gaariga lagu soo eedeeyay inuu qarxay, isla markaana loo xiray arrintaas daraaddeed, wuxuuna xusay kadib markii uu keenay gaariga caddeeyayna in uusan qarxin dib loo siiyay xoriyaddiisa.
Milkiilaha gaariga la eedeeyay wuxuu sheegay inuu gaariga u gatay inuu qudaar kaga soo qaado beer ku taal Shabeellaha Hoose.
“Intaas kadib, waxaan arkay waraaq ay soo qoreen UN-ka oo ay leeyihiin baabuurka taargadiisu tahay 2737 AH, waa qarxayaa, wuxuuna qarxayaa inta u dhaxeysa Shanta ilaa Siddeedda bishaan”, ayuu yiri Ciise Cabdullaahi.
Ciise Cabdullaahi, wuxuu caddeeyay in gaarigiisu uusan la ahayn wax danbi ah, uuna hadda ka ballan sahay Nabad-sugidda oo looga yeeray.
Nabadoonka Milkiilaha gaariga la eedeeyay, Cusmaan Carraale Jeyte ayaa sheegay in sharaftooda meel looga dhacay oo laba mar dhusha laga saaray danbi aysan lahayn, isla markaana ay doonayaan in magdhow laga siiyo magac dilka lagu sameeyay.